Dalka Sweden oo Lo’da loo ogolaaday in ay booqdaan xeebaha dadka qaawan… – Hagaag.com
Dalka Sweden oo Lo’da loo ogolaaday in ay booqdaan xeebaha dadka qaawan…
Posted on 12 Agoosto 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Masuuliyiinta koonfurta Sweden ayaa u oggolaaday lo’da in ay soo booqdaan “xeebaha qarsoodiga ah ee dadka qaawan” inta lagu guda jiro mawjadaha kulul ee daba dheeraaday oo ku dhufatay wadanka waqtigan xaadirka ah, inkastoo ay cabashooyin ka muujiyeen dadka deegaanka.
Dadka u tamashlaha taga xeebaha dadka qaawan ayaa sheegay joogitaanka lo’du ee xeebahooda ay tahay mid “caafimaad daro, waxaana suuragal ah in ay halis ku yihiin caafimaadka dadka.”
Mowjadaha kuleylka ayaa saameynaya qaybo badan oo Yurub ah, taasi oo sababtay abaaro dalka Sweden oo dhan, taas oo macnaheedu tahay in beeralaydu ay si xun u saameysay sidii ay u heli lahaayeen quutul yoomka xaywaankooda.
Tani waxay ka dhigan tahay in beeralayda qaarkood ay go’aansadeen in ay xoolaha gowracaan waqti hore, laakiin qaarkood kale ayaa go’aansaday in ay u qaadaan xeebaha dadka qaawan ku dabaasha oo deriskooda ah, si ay hawo fiican u helaan, sida lagu baahiyey kanaalka CVT ee guud.
“Marka abaaro jirto, ma rabtid inaad qashid lo’da sababaha jira awgood, sidaa darteed waxaa waajib ah meel ay ku qubeystaan, cunto iyo cabid ka helaan, sidaasi waxaa yiri mas’uul ka tirsan dowlada hoose Peter Bengtson.
Cabashooyin ayaa laga gudbiyey xaaladan kadibna maamulka dhaqanka iyo tamashlaha ee degmada Vaxo ayaa cod u qaaday booqashada lo’da ee xeebaha, waxay ku soo dhamaatay in lo’du ay xaq u leedahay inay halkaasi joogaan sida booqashada dadka oo kale.
“Dumarka xeebta waa inaysan halis u ahayn inay qaadaan cudurro sida E.Coli, sidaa daraadeed beeraleydu waa inay iska ilaaliyaan in ay gudaha u geliyaan biyaha lo’da haddii ay jiraan dad doonaya inay dabaashaan,” ayuu yiri Bangtson.
Waxa uu tilmaamay in shimbiruhu ay booqdaan xeebaha dadka qaawan ee Samaland, laakiin wuxuu cadeeyay in haddii walaac ku saabsan amniga ama cudurka xasaasiyada la soo sheego, saraakiishu waxay la hadli karaan milkiilayaasha xoolaha si looga hortago.